FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA HAVACHON - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Havachon
Alika mifangaro Bichon Fris / Hipedia mifangaro
Lani the Havachon ho alika kely amin'ny 10 volana
Ny Havachon dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bichon frize ary ny Hipedia . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
mpiandry anatolianina sy pyrenees lehibe mifangaro
Roxy the Havachon amin'ny faha-8 taonany
'Ity no Havachon efa-taona nantsoina hoe Enna. Tena marani-tsaina izy ary mahafantatra tetika maro toy ny mihodina, milalao maty, mihozongozona, mandihy ary onja. Enna dia malefaka be ary faly mihaona amin'ny olona sy alika vaovao. Ankafiziny koa mandeha an-tongotra ary milalao fetch. Enna dia tia ny sakafony! Toa marina eo ambaniny ao an-dakozia foana izy eo am-piandrasana sisa hianjera. Amin'ny maha alika kely azy dia mora i Enna lamasinina poti . Roa fotsiny ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao an-trano. Faly be izahay fa manana an'i Enna ao amin'ny fianakavianay izy ilay alika tsara indrindra azonay nangatahina. Mankafy azy fotsiny ny olon-drehetra ary ankehitriny misy olon-kafa telo ao amin'ny fianakavianay manana Mifangaro Bichon ! '
'Ity i Max amin'ny 8 volana. Hizaha ny fiovan'ny volon-dambany? Izany no toetra mahafinaritra an'ny Hava. Silky be ny volony, tiako ny misafosafo azy. Manana fanazaran-tena isan'andro izahay izay manosotra ny tsihy miaraka amin'ny borosy slicker. Raha malahelo be loatra izy, dia mahazo iray amin'ireo taolana vita amin'ny fingotra ireo miaraka amin'ny lava-pako ho an'ny fanadiovan'ny nify ary fenoy dibera voanjo ny lalan-kely. Mitsako ny taolana eo am-pofoako izy ary toa tsy mahamarika ahy sy ilay borosy somary malama. Mitifitra manimba aho rehefa miborosy azy, fa ny tena zava-dehibe dia ny miborosy azy isan'andro vao manomboka manelingelina azy ny tsihy sy ny tangles.
'Mijery ny Dog Whisperer mazoto aho ary ny fampisehoana nataony dia nanampy ahy ho lasa tompona alika tsara kokoa. Amin'ny hariva dia mijanona eo am-baravarana patio i Max ary mibolisatra amin'izay mihetsika rehetra. Nianarako ny nijery an'i Cesar niditra teo anelanelan'ny Max sy ny varavarana ary nijoro tamina fihetsika nilaza hoe, 'Ity no varavarako!' ary lazao amin'i Max hoe 'tsy misy hodi-kazo.' Roa andro monja ny fampiofanana tsy miova ary efa mamaly tsara izy.
'Max tia rano sy fotaka. Ity sary ity dia nalaina taorian'ny fihorakorahana be! '
'Ity i Max, alika zanak'olombelona hylandey / Bichon. Hatrany am-piandohana, Max dia tia ny nalaina sary. Haingana izy nianatra nipetraka. Nentiny tany amin'ny Lab mainty anay, Gabe, ary tonga mpinamana haingana izy ireo. Gabe dia Lab manam-paharetana, misaotra, satria i Max dia manerana azy, mitsako ny rambony, ny tongony, amin'izay azony tratrarina.
'Max faly sy velona toa ny alika kely rehetra. Vehivavy misotro ronono milamina aho, ka milalao miaraka amin'i Max moramora aho, mamporisika milalao malefaka. Mijery kilalao foana aho eo akaiky eo ary rehefa mitsako ny rantsan-tànako sy ny rantsan-tongotro izy dia esoriko tsotra izao ny rantsan-tànako sy ny rantsan-tongotro avy eo aminy ka omeko kilalao. Toa afa-po izy raha mbola manana zavatra hitsakoana. Rehefa lasa mahery setra loatra ny fitondrantenany dia mandeha isika mandeha / mihazakazaka miasa kely angovo Tiany ivelany izany.
'Tian'i Max ny zafikeliko, indrindra ireo zazavavy 3 taona sy ireo 6 taona. Tiany ny manenjika ary mientanentana toy ny ankizy ihany. Hitany fa mahafinaritra ny mikipy amin'ny rantsantongony sy ny rantsan-tànana mahita azy ireo mandihy, noho izany ny fanambiko dia ny hampiofana ny zafikely hilalao nefa tsy misy fientanam-po loatra.
'Fanofanana lehibe ny fanambadiana vilany. Indrindra, izao avy ny orana sy ny hatsiaka any ivelany. Tsy misy amintsika te-ho ao anatin'ireo singa ratsy ireo. Niezaka ny nampahafantatra azy ilay pee aho, fa noraisiny ho toy ny fanamby manokana hihaona na aiza na aiza fa amin'ny pad mampatahotra. Namaky momba izany aho crate fiofanana amin'ny tranokalanao ary mety manandrana izany. Napetrako tao anaty sambo izy tamin'ny alina ary nony antoandro rehefa be atao loatra aho ka tsy afaka mijery azy (tiako ihany koa!). Hatreto dia mbola tsy nanome olana tamiko izy. '
Muffin ilay mix Bichon Frize Hava fotsy (Havachon) fotsy amin'ny faha-7 volana
Lani the Havachon ho alika kely amin'ny 2 volana
Lani the Havachon ho alika kely amin'ny 7 volana
Sary Havachon 1
Lisitry ny alika mifangaro Bichon Frize mifangaro
anglisy bulldog sy ny omby terrier Mix
retriever Labrador sy ny lavaka omby terrier
sarin'alika zanak'alika poodle mahazatra
pit bull terrier shar pei mix
beagle sy alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely